Halkee ayuu marayaa heshiiskii Cayaartoy is dhaafsiga ahaa ee kooxaha Manchester City iyo Arsenal? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Halkee ayuu marayaa heshiiskii Cayaartoy is dhaafsiga ahaa ee kooxaha Manchester City iyo Arsenal?
(30-8-2017) Waxaa siweyn loo hadal hayey Talaadadii heshiis lasheegay in uu dhax mari doono kooxaha Manchester City iyo Arsenal kaas oo ku salaysan Cayaartoy lays dhaafsan doono Waxaase lasheegayaa in wejiga hore ee Wadahalkii ku dhamaaday is faham la aan.
Kooxaha Arsenal iyo Manchester City ayaa lasheegayey in ay is dhaafsan doonaan Xiddigaha kala ah Alexis Sanchez, iyo Raheem Sterling balse Arsenal ayaa lasheegayaa in ay diidey Cayaaryahanka dalka England iyo sidoo kale £50m oo kaash ah waxaana lagu kala dareeray wadahadalka wejigiisa hore in kasta oo dib loo balamay.
Macalinka kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa sidoo kale beeniyey in Cayaaryaahnka Alexis Sanchez,uu fasax ka soo qaatay Xulka dalkiisa si uu ugu biiro Manchester City isaga fasaxa Xiddigaan ee Xulkiisa ku micneeyey arimo shaqsi oo isaga gaar u ah.
Alexis Sanchez,ayaa heshiiska uu kula joogo Arsenal waxaa ka dhiman 11 bilood si cad ayuuna u diidey in uu Saxiixo heshiis Cusub waxaa kaloo lacadeeyey in uu isniintii gudbiyey warqad Cosdi ah oo ah la iibiyo sidaa daraadeed ayaa Sky Sports News Waxa uu u shaaciyey in laba Gooraba inta uusan suuqo xirmin uu katagi doono Arsenal.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Arsenal ogolaan doonto in ay qaadato Raheem Sterling iyo -£30m isla Markaana kahor inta uusan Xirmin suuqu habeenimada khamiista toos loogu dhawaaqi doono heshiiska kala wareegsi ee labada kooxood.
Raheem Sterling ayaa kulankii u danbeeyey ee Manchester City Horyaalka England u dhaliyey Goolka Guusha halka Alexis Sanchez Cayaartiisii koowaad ee Xiligaan lagu soo dhaweeyey Guuldaro xanuun badan Markii Liverpool ku garaacday 4-0.